Ny Fikambanan'ny Tantaran'i Lower Manhattan dia nanambara ny festival faha-4 Jolay farany teo tany Manhattan Ambany
Home » Ho an'ny famotsorana eo noho eo » Ny Fikambanan'ny Tantaran'i Lower Manhattan dia nanambara ny festival faha-4 Jolay farany teo tany Manhattan Ambany
Jona 23, 2017
Ny Fikambanana Momba ny Tantaran'i Manhattan any Lower Manhattan, miaraka amin'ny Zanakalahin'ny Tolom-piavotana Ny fanjakan'ny New York, ny Corps veterann'ny artillery State of New York, The Sons of the American Revolution and Culture now dia manambara ny Fetiben'ny 4 jolay tany Manhattan Ambany
Ny fankalazana dia manomboka amin'ny 11:00 maraina 2 Jolay, miaraka amin'ny lanonana mari-pankasitrahana ho an'ny mpifindra monina Alexander Hamilton ao amin'ny Federal Hall, 26 Wall Street. Peter Koo, Mpanolotsaina avy any Flushing, teraka tany Hong Kong, Guillermo Linares, lehiben'ny maso ivoho mpampindram-bola ho an'ny mpianatra any New York, avy any Washington Heights izay teraka tany amin'ny Repoblika Dominikanina, James Neary, ilay restaurateur fanta-daza ary Ny mpiambina saloon ao amin'ny 57th Street, izay teraka tany Irlandy sy Chakanaka Watch, pasitera amin'ny radio ary mpiandry tafika famonjena, teraka tany Zimbabwe, dia homem-boninahitra. Mpifindra monina daholo izy ireo ary nanao fanomezana be dia be ho an'ny tanàna.
Teraka tany Nevis, any Karaiba, i Alexander Hamilton, ary tonga tany Etazonia tamin'ny faha-15 taonany. Rehefa maty izy tamin'ny 1804, dia mpanampy lehibe an'i George Washington izy nandritra ny Revolisiona Amerikanina ary izy no sekretera voalohany an'ny firenena Tahirimbolam-panjakana izay nanorenany ny rafitra ara-bola ao amin'ny firenena.
Taorian'ny lanonana fanomezana, tokony ho tamin'ny 12:30, nitohy tamin'ny Fetin'ny Fahaleovantena ny fankalazana tamin'ny fankalazana ny faha-roa taonan'ny lakandranon'i Erie. Manomboka amin'ny Federal Hall ny diabe, izay hamerenan'ny reerakira DeWitt Clinton sombintsombiny iray tamin'ny Fahatsiarovana New York 1815 izay naharesy lahatra an'i New Yorker hanohana ny fanamboarana ny lakandrano. Izy io dia hotarihin'ny Corps Veteran an'ny Artillery-State of New York arahin'ny tarika roa, ny Richmond County Fife & Drum Corps ary ny Crimson Kings an'ny Sekolin'i Chinatown ary hiroso amin'ny Bowling Green ary avy eo mankany amin'ny South Street Seaport.
Mifarana eo amin'ny South Street Seaport ny diabe, miaraka amina lanonana fanampiny sy fialamboly, miaraka amin'ny mpitantara tantara sy mpitendry mozika Jonathan Kruk ary ireo Ramblers manao ireo hira Erie Canal.
Misokatra ho an'ny besinimaro ny hetsika rehetra ary entanina ny rehetra hanatevin-daharana ny matso.
Ny LMHA dia handrindra hetsika ara-tantara sy fankalazana maromaro amin'ny 4 Jolay, ao anatin'izany:
Amin'ny 11:00 maraina, ny Corps veteran an'ny artillery-State of New York dia handefa fiarahabana manodidina ny dimam-polo ho an'ny The Nation. Ny 75 MM Pack Howitzers dia handroaka ny rindrin'ny ranomasina manoloana ny Castle Clinton ao amin'ny Battery Park.
Manomboka amin'ny 12: 00 ka 2: 30, izy National Park Service dia hampiantrano hetsika ao amin'ny Federal Hall izay misy ny famakiana ny The Declaration of Independence and fampisehoana mozika.
Amin'ny 3:00, ao amin'ny Hall Federal dia hisy ny famakiana ny taratasin'i George Washington tamin'ny 1790 ho an'ny Touro Synagogue any Newport Rhode Island. Ao anatin'izany no nanambarany fa i Etazonia dia “tsy hanome sazy mihoa-pefy, amin'ny fanenjehana, tsy misy fanampiana” mametraka fandeferana ho an'ny jiosy sy ireo vitsy an'isa hafa ho lalàna amin'ny tany.
Raha mila fanazavana fanampiny, contact James S. Kaplan, [email voaaro], 646 383 3688.